Fiterahana amin'ny fanehoana an-tsehatra - biomechanism ny fiterahana amin'ny fampisehoana an-dabozia. Famelabelarana Pelvika - fiterahana na voajanahary?
Ny fahaterahana amin'ny fampisehoana an-davitra - ahoana no hiomanana amin'ny reny?
Ny fahateraham-baovao miaraka amin'ny tsikera dia mahatsiravina amin'ny loza maro. Noho izany, ny fampiofanana vehivavy bevohoka toy izany dia natao mialoha. Andao hodinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa io tranga io, hanoritra ireo zavatra manokana amin'ny fitantanana ny fikarakarana ny razambe, izay mety hitera-doza amin'ny fizotran'ny zazakely.
Biomechanism ny asa amin'ny fanolorana fanatrehana
Alohan'ny hiomanana amin'ny fiterahana, ny dokotera dia manatontosa fandaharam-pitsaboana mandritra ny andro vitsivitsy mba hijery raha niova ny toerana misy ny foetus. Tamin'ny fiantombohan'ny fizotran'ny fiterahana dia nandeha tany amin'ny efitrano fianarana ny vehivavy. Ny tena fomba fiasan'ny asa ao amin'ny fampisehoana an-dranomamy dia toy izao manaraka izao:
Ampidiro kely ny lakolosy kely ao anaty lakolosy ary mihodina eo amin'ny lakandrano. Ny dingana dia manomboka amin'ny hoe ny tsipika glutealy dia ny fampidirana ny torso amin'ny zaza. Avy eo dia mitsofoka ao anaty lavaka kely ilay lakolosy kely. Ao anatin'ny dingan'ny ady dia milentika ny rambony, ary miditra lalindalina kokoa ny valizy. Ny lavaka iray dia mianjera eo ambany. Izy io dia miasa mivantana ho toy ny teboka famaritana, toy ny fontanel kely eo amin'ny toeran'ny lisitra.
Fiovana farany. Misy fihodinan'ny vava. Mandritra izany fotoana izany, ny lohataona dia manatona ny famaritana samihafa, ny ambiny dia tarihin'ny sakramenta.
Famaranana sy fipoahan'ny vava. Mitranga izany aorian'ny fikorotanana ny taolam-borona eo anelanelan'ny zaza ao amin'ny faritra iliac. Noho izany dia teraka ny fiafaran'ny fiterahana. Amin'io tranga io, ny fihenam-bidy dia mampiaraka mafy. Amin'ny endrika fampifangaroan-tsiranoka dia misy tongotra iray na roa mivoaka.
Ny fiterahana ny fehikibo. Ny fihodinan'ny tetezana dia mihatra amin'ny ankapobeny miaraka amin'ny fihenan'ny loha. Ny fehikibo manerantany dia teraka ary ny head previa - napetraka ao amin'ny fehin-kevitry ny vehivavy mitaiza ny habaka.
Ny fahaterahana ny loha. Ao anaty toerana mivaingana. Ny fossa ambany fifehezana dia mamaritra ny bikan'ny taolana tapaka. Aorian'izany, ny zaza, ny tarehin'ny zazakely, ny handriny, ny satroboninahitra ary ny lamosin'ny loha dia teraka tsikelikely.
Ahoana no hanombohan'ny fitateram-bidy?
Ireo mpialoha lalana ny asa ao amin'ny fampisehoana an-dranomasina dia tsy mitovy amin'ireo izay mialoha ny fizotry ny aretina amin'ny aretina. Toy izao ny:
ny fialan'ny bosoa ;
fanakanana tsy tapaka;
Na izany aza, misy lafiny sasany amin'ny fanombohana avy hatrany ny fizotran'ny fahaterahana. Noho izany dia afaka manomboka ny dingan'ny sesitany rehefa tsy misy fanokafana tanteraka ny tranonjaza. Izany dia noho ny haben'ny kely indrindra amin'ny fiafaran'ilay pelvika, raha ampitahaina amin'ny lohan'ny iray. Noho izany, amin'ny fotoam-piterahana voalohany dia voatery manitsaka fandriana ny vehivavy. Izany dia manakana ny fivoaran'ny fahasarotana amin'ny fizotran'ny fametrahana.
Ahoana no fahaterahana eo amin'ny fampisehoana an-dranomandry?
Ny fizotran'ny asa ao amin'ny fampisehoana an-dranomasina dia voafehin'ny mpitsabo mpanamboatra tanteraka. Ny fitsipika fototra amin'ny fitondran-tena amin'ny fiterahana dia ny mitazona ny toerana mety amin'ny zaza. Ny tongony dia tokony haninjitra ny tongony. Ny voankazo dia manipika azy any amin'ny tratra. Voalohany dia teraka eo amin'ny elatra ny zazakely, avy eo eo amin'ny sisin'ny faribolana ambany. Aorian'io, ny tanana, ny fehikibo dia mivoaka ary ny loha dia teraka.
Ny teboka lehibe amin'ny asa fanehoana an-tsitrapo dia:
ny fisorohana ny fahaverezan'ny tongotra;
fanampiana amin'ny ilàna ny manala ny vata sy ny loha (mba hisorohana ny fahaterahana);
ny fampiharana ny episiotomy (ho an'ny fahaterahana haingana ny loha).
Famelabelarana Pelvika - fiterahana na voajanahary?
Amin'io karazam-panavotan'ny zaza ao an-kibon-dreniny io, toy ny fanehoana an-davitra ny foetus, dia ny mpitsabo no mamaritra ny teraka na ny sesarean. Amin'io tranga io, ny dokotera dia miteny amin'ny fiterahana voajanahary. Saingy tsy voatery foana io karazana fanomezana io. Ao anatin'ireo fanondroana ny fizarana cesarean amin'ny fampisehoana an-dabozia, dia ilaina ny manamarika:
ny fitondran'ny lahy foetus;
ny fiandohan'ny fiandohan'ny fanabeazana;
fehin-kibo kely amin'ny vehivavy raha miteraka;
ny mety hisian'ny fanitarana ny loha mandritra ny asa;
lehibe na mifanohitra amin'izany - voankazo kely (latsaky ny 2.5 kg na mihoatra 4);
ny fihenan'ny tadim-poitra;
Azo terena miaraka amin'ny fampisehoana an-doha ve ny teraka voajanahary?
Ireo mpitsabo dia mamaly io fanontaniana io amin'ny fanamafisana. Ny natiora voajanahary miaraka amin'ny fampisehoana an-dabozia dia tanterahina miaraka amin'ny gléétalatera sy ny gluteal fandaharana ny foetus. Amin'ity tranga ity, ny dokotera dia mandray anjara amin'ny endriky ny fiatraikany, izay mamela ny fahateraham-baovao:
tsy fisian'ny tadim-poitra ;
ny habaka ara-dalàna amin'ny lakolosy;
fisokafana amin'ny fotoana voatokana;
Mitantana ny fahaterahana ho an'i Tsovyanov amin'ny fampisehoana an-tsokosoko
Raha jerena ny toetran'ny asa ao amin'ny fampisehoana an-dranomandry, dia ilaina ny manamarika fa matetika amin'ny fampitaovana toy izany dia mampiasa ny boky ny Tsovyanov. Ny tanjona amin'izany dia ny mitandrina ny fandaminana ara-dalàna ny ampahany amin'ny vatana mandritra ny dktatera. Noho izany, mandritra ny fandroahana ny zazakely dia ilaina ny miantoka fa ny tongotra dia mipetaka foana ary mikisaka amin'ny vatana (tsilo).
Mandritra izany fotoana izany, araho ny tanan'ny zazakely rehefa mitazona ny tongotra. Izany dia misakana ny fanilihana. Ny tongotra dia miorina amin'ny haavon'ny tarehiny, izay mitahiry ny toerana mibontsina ny loha. Ao anatin'io toerana io, mahazo vinaingitra mifangaro ny vatan'ny foetus. Ny volam-bidy ambony indrindra dia tratra eo amin'ny soroka (42 sm metatra). Rehefa teraka ny soroka, dia tsy misy fahasarotana ny endriky ny loha. Izany no fomba fitanterana ny famelabelarana amin'ny fampisehoana pelvic.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny tetika sy ny fankatoavana ny fizarana ny fanomezana ny fanomezana dia tsy miteraka ny fivoaran'ny fahasarotana. Na izany aza, tsy mitranga foana izany. Anisan'ireo fanitsakitsahana azo atao, ny dokotera dia miantso ireto vokatry ny asa manaraka ireto:
fisotroan-dronono am-piandohana aloha loatra;
fahaverezan'ny ampahany amin'ny vatana sy ny tadim-poitra;
Fahalemena voalohany amin'ny asa asa;
Ny fahafatesana fetal (miaraka amin'ny fihenan'ny tadim-poitra mahazatra eo amin'ny rindrina ahitra mandritra ny 10 minitra);
faniriana amin'ny fluid amniotique;
Famelabelaran-dresaka ho an'ny Pelvika - fitaterana vao haingana
Ny fiterahana amin'ny fanehoana ny fetsy dia manomboka matetika ny fotoana voatondro. Izany dia noho ny fanerena be loatra ny ampahany amin'ny gluteal amin'ny vatana eo amin'ny tranonjaza. Raha jerena ny zava-misy, ireo vehivavy manana fanatanjahan-tena miorina amin'ny toeram-pitsaboana miorina mafy dia marary 38 ka hatramin'ny 39 herinandro. Manomàna amim-pitandremana amim-pitandremana ny dingana, araho ny fanokafana ny mati-kaja sy ny foetus. Izany dia manampy mba hisorohana ny fampivoarana ny fahasarotana amin'ny dingan'ny fanomezana.
Fihetseham-po tsy mety tapitra ho an'ny vehivavy mitia
Aorian'ny fiterahana dia tsy misy isam-bolana
Fanokanana manaraka fizarana seza
Ahoana no fomba hidiran'ny rano amin'ny vehivavy bevohoka?
Ahoana ny fomba hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny fiaramanidina?
Firaisana ara-nofo taorian'ny fiterahana
Vavaka amin'ny fiterahana
Ny jogara maraina noho ny fahaverezan'ny fahavoazana
Snore avy amin'i Mohair
Diôgerika miaro ny potassium
Astrakhan - toetoetran'ny mpizahatany
Ny herinandro faha-30 amin'ny maha-bevohoka - inona no mitranga amin'ny zaza, ary ahoana no mahatsapa ny fihetseham-pon'ilay reny mandritra io fotoana io?
Ahoana no ahafahako manadio ny aura?
Manosotra ny vavony amin'ny herinandro voalohan'ny fitondrana vohoka
Fanatanjahan-tena mitaingina - sary 40 modely ho an'ny tsiro rehetra
Fomban-drazana any Inde
Akanjo fohy - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana lamaody maoderina?
Katsaka amin'ny ratsan-tongotra kely - ahoana no ahafahana miala?
Kofehy ho an'ny pastèque
Ahoana ny fahaterahana?